Razaimamonjy Claudine : Mitovy amin’ny voafonja rehetra -
AccueilRaharaham-pirenenaRazaimamonjy Claudine : Mitovy amin’ny voafonja rehetra
Razaimamonjy Claudine : Mitovy amin’ny voafonja rehetra
14/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny fampidirana an-dRazaimamonjy Claudine tetsy amin’ny fonjan’ Antanimora omaly tamin’ny 7 ora sy sasany, araka ny tapaky ny kaomity miandraikitra izany, nahitana ny tompon’andraikitry ny fitsarana , ny mpitsabo ny avy amin’ny ministeran’ny fahasalamana dia indro fa efa naparitaka indray ny tsaho fa tsy ao an-toerana ity farany. Omaly manoloana ireo tsaho miely etsy sy eroa ireo dia nitondra fanazavana ny lehiben’ny fonja etsy Antanimora ny kaomandà Rakotonandriana Olivier fa “tsy misy izany ny toerana manokana ho an’i Claudine Razaimamonjy, ary mitovy amin’ny voafonja rehetra ny tenany ao’’. Noho izany dia tsy mitombina velively ny resaka tiana hatavy sy fanaratsiana tian’ ireo mpanakorontana hatao, mazava izany ny fanazavan’ny tompon’andraikitry ny fonja. Manoloana ny mety ho mbola fanaraha- maso ny fahasalaman’ity mpandraharaha ity indray kosa, dia nanazava ny lehiben’ny fonja fa tsy misy hatahorana izany « misy ny mpitsabo rehetra toy ny dokotera, ny infermiera sy ny sisa ato amin’ny fonja izay afaka manara- maso tsara ny fahasalaman’ny voafonja rehetra ».
Ankilany anefa dia re naneho hevitra manoloana ity raharaha ity ihany koa ny sendikàn’ny mpitsara androany, ary nilazan’izy ireo fa ankoatra an-dRazaimamonjy Claudine dia tokony hisy ihany koa ny fandraisan’ny Bianco andraikitra amin’ny fisamborana ireo naman’ ity farany. Marihina anefa fa rafitra mahaleo tena ny bianco ary mahalala tsara ny asa izay hotanterahiny. Noho izany dia tokony hifanaja amin’ny fisarahan’ny asa ny tsirairay, tahaka ny fitakiana izay tanterahin’ny sendikàn’ny mpitsara amin’ny tsy hitsabahan’iza na iza amin’ ny asa izay tanterahin’ izy ireo.
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny fanomezana herinaratra ireo faritra manerana an’i Madagasikara. Omaly, nitsidika an’i Nosy-Be ny tenany niaraka tamin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta sasantsasany. Tamin’izany indrindra no nanatanterahana ny lanonana ...Tohiny